Microsoft Teams dia hamela ny fampiasana ny mode Together miaraka amina vondrona kely kokoa | Avy amin'ny mac aho
Microsoft Teams dia hamela anao hampiasa maody miaraka amin'ireo vondrona kely kokoa
Iray amin'ireo vahaolana hiantsoana video izay be mpampiasa indrindra, miaraka amin'ny Zoom, nandritra ny areti-mandringana, ny Microsoft Teams, fampiharana izay efa misy ho an'ireo mpampiasa tsy miankina ary hampidirina ao anaty Windows 11 ihany koa. Ny orinasan'i Satya Nadella dia miasa amina endrika vaovao ahafahana mamela izany mampiasa maody miaraka amin'ny vondrona kely kokoa.
Ny maody miaraka amin'ny ekipa Microsoft dia mampiasa faharanitan-tsaina apetraho ao amin'ny efitrano malalaky ny efitrano fivoriana ny mpandray anjara rehetra, ao amin'ny trano fisakafoanana… Fanesorana ny mombamomba azy ireo tsirairay avy, manome fiheverana tsy dia ofisialy izay manamora ny fahazoana ny endrika ivelany amin'ny tarehy sy ny fitenin'ny vatana.
Miara-mamela ny maody miaraka amin'ny efitrano iray hatramin'ny mpandray anjara 49 ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny interlocutors 5. Na izany aza, avy amin'ny Microsoft dia efa manandrana ity fomba vaovao ity izy ireo amin'ny fivorian'ny olona roa ihany.
Amin'izao fotoana izao, ity vaovao ity Fiaraha-miasa ho an'ny olona roa, Azo alaina ao amin'ny maody ho an'ny mpamorona izy io, noho izany dia herinandro maromaro vao alefa amin'ny mpampiasa rehetra. Soa ihany, ireo mpampiasa efa mampiasa an'ity sehatra ity dia afaka manomboka mampiasa azy amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny maody ho an'ny mpamorona.
Mila tsindrio fotsiny ny ellipsis eo akaikin'ny sarin'ny mombamomba antsika, kitiho ny About ary avy eo amin'ny topi-maso ny Developer / View an'ny Developer. Raha tsy miseho io safidy io dia azo inoana fa ny kaonty ampiasainao manana fetra raha ampiasaina amin'ny tontolo matihanina.
Ity fanovana ity dia nampahafantarin'i Amanda Sterner, Microsoft MVP tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter-ny. Azo inoana fa hivoaka amin'ny endriny farany ity fampiasa ity amin'ny faran'ny volana Aogositra na ny voalohan'ny volana septambra, rehefa tapitra ny fialantsasatry ny fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Microsoft Teams dia hamela anao hampiasa maody miaraka amin'ireo vondrona kely kokoa
Apple Watch dia afaka mamantatra ny vokatra maharitra amin'ny COVID-19
Ny mpampiasa HomePod sasany dia milaza fa noho ny kinova 14.6 dia nijanona tsy niasa intsony izy ireo